Nagu saabsan - Magaalada Zhangjiagang Daking Jewellery Co., Ltd.
Alaab-qeybiye tayo sare leh oo alaab-qeybiye ku saleysan silsiladda warshadaha oo dhan iyo sumadda. DAKING dahabka waxaa si rasmi ah looga aasaasay 1992 gudaha Zhangjiagang, oo ah magaalo deked leh oo u dhow shanghai, oo ku teedsan wabiga Yangzi. Tan iyo markaas, waxaan u xuubsiibnay alaab-qeybiye nooc kasta oo luul ah. Oo ay ku jiraan wax soo saarka, naqshadaynta iyo dhoofinta dahabka pear, dahabka dahabka, dahabka dahabka iyo sidoo kale dahabka qaaliga ah ee qaaliga ah iyo dahabka labiska moodada.
28 Sano Oo Khibrad Leh
DAKING dahabku wuxuu u heellan yahay heer sare iyo tayo dhammaan dahabkeena luul iyo adeegga macaamiishayada. Muddo 28 sano ah, waxaan u heellanay horumarinta iyo ka faa'iideysiga luul leh xirfad, xilkasnimo, hufnaan iyo qaab shaqo iyo hal abuur cusub. Iimaan wanaagsan, feker leh, iyo sumcad wanaagsan oo maamul, Waxaa naga go'an horumarinta Warshadaha Pearl ee sayniska, tikniyoolajiyadda, qiyaasta iyo astaanta, waqtigan, waxaan u adeegnay macaamiil badan oo adduunka ah oo raadinaya kuwa ugu fiican luul tayo leh.Qurux kasta oo dahab ah waa mid gacmo lagu farsameeyay oo asal ah.
Kobacayagu wuxuu ku sii socdaa alaabada cusub ee lagu horumarinayo si joogto ah. Tayo Sare. Wanaagsan Qiimaha. Wanaagsan ee Adeeg. Waqti aad u badan ayaan ku bixineynaa xulashada, falanqaynta iyo abuurista qayb kasta oo dahab ah maxaa yeelay waxaan rabnaa in lagugu adeego kaliya adeegga macaamiisha ugu fiican. Waxaan rabnaa inaad ku lugeyso gabal cusub oo dahab luul ah oo aad dareento kalsooni iyo farxad.
Aaa Biyo Macaan, Hadiyadaha Gabdhaha Freshwater Pearl, Hilqado Aroos, White Gray Freshwater Pearl, Hilqado Pearl Pear, Dhalasho Dhab Ah Dhaqan Biyo Macaan,